Latest news about Chris Mutsvangwa from Nigeria and world | TODAY.NG
Home Topics Chris Mutsvangwa
Report: Zimbabwe elections will be ‘nail-biting’
My wife played key role in toppling Robert Mugabe – Emmerson Mnangagwa’s adviser
A top official in President Emmerson Mnangagwa’s government in Zimbabwe says his wife played a key role in ousting Robert Mugabe from power.
New Zimbabwean govt ‘orders land grabbers to vacate farms’ – report
Zimbabwe's new minister of lands, agriculture and rural settlement, Retired Air Marshal Perrance Shiri, has reportedly ordered those who have illegally occupied farm lands to leave "immediately" or face the wrath of law.
No opposition members in Zimbabwe’s new cabinet
Zimbabwe’s newly installed President Emmerson Mnangagwa has appointed senior military officials to top posts in his Cabinet. The announcement was made late Thursday on state-run television.
Zimbabwe’s Emmerson Mnangagwa gives key cabinet jobs to military figures
Zimbabwe's ruling party on Monday ordered impeachment proceedings to begin against longtime President Robert Mugabe and expressed confidence that he could be voted out within two days, while the world's oldest head of state ignored the party's midday deadline to resign and instead summoned ministers to a Cabinet meeting on Tuesday morning.
Robert Mugabe could be impeached in 2 days – Zanu-PF
Zimbabwe's ruling party expressed confidence on Monday that longtime President Robert Mugabe could be impeached within two days, while the world's oldest head of state ignored the party's midday deadline to resign.
Military ‘should step back and allow people to oust Robert Mugabe’ – war veterans
Zimbabwe's influential war veterans association says the military should step back and let the people, and politics, remove longtime President Robert Mugabe from power.
Zimbabwe’s crisis could turn violent – official
Robert Mugabe threatened with mob by Zimbabwe war veterans leader
The leader of Zimbabwe's war veterans has threatened to unleash the mob if Robert Mugabe does not resign his role as President.
Thousands of Zimbabweans are expected to demand President Robert Mugabe's resignation on Saturday at a march in the capital, Harare.
Motion to oust Robert Mugabe tabled in parliament – report
A motion of 'no confidence' in embattled Zimbabwean President Robert Mugabe has reportedly been tabled in parliament by an opposition lawmaker, according to a report.
A Catholic priest is mediating a potential political exit for Zimbabwe President Robert Mugabe, although the 93-year-old is insisting he can only be removed via a party leadership vote, political and intelligence sources said on Thursday.
Zimbabwe takeover should not lead to unconstitutional govt – South Africa’s Jacob Zuma
President Jacob Zuma of South Africa expressed hope on Wednesday that there would not be unconstitutional changes of government in Zimbabwe after the military seized power in Harare.